လင့်​တွေ​ကို ​ညွှန်း​ကြ​ရ​အောင် ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
kaungkinpyar January 6, 2009 at 11:12 PM
​ဒီ post ​ကို​စောင့်​နေ​တာ...​ကျေး​ဇူး
​ဝှိုက်​ဝှိုက် January 8, 2009 at 10:11 AM
​ခု​လို​ပြော​ပြ​ပေး​လို့​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ် ​နောက်​လည်း ​အ​များ​ကြီး​ပြော​ပြ​နိုင်​ပါ​စေ
Nya Moe December 22, 2009 at 9:44 PM
maimai January 1, 2010 at 1:48 AM
Template ​အောက်​ဆုံး​က ..​နောက်​သို့၊ ​မူ​လ​စာ​မျက်​နှာ ၊ ​ရှေ့​သို့ ​ဆို​တဲ့​ဟာ​လေး. ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​တာ​လဲ​ခ​များ။
Rvwang MvRing..! September 16, 2011 at 5:20 PM
( ​ဒီ ) ​ကို clcik ​လို.​ရ​ဘူး​ကော